KDE Mafomu Anoshandura Zita kuKDE Gear uye Inosvika naApril Kugadziridza | Linux Vakapindwa muropa
KDE Zvikumbiro zvinoshandura zita ku KDE Gear uye zvinosvika pamwe nekuvandudzwa kwaApril
Mazuva mashoma apfuura Kubvumbi Kuwedzera App Gadziriso Yakaburitswa (21.04) yakagadzirirwa neiyo KDE chirongwa uye mune iyi senge iyi vhezheni, iyo yakasimbiswa KDE suite ikozvino ichave ichaburitswa pasi pezita KDE Gear, panzvimbo ye "KDE Applications".
Pakazara, sechikamu chekuvandudzwa kwaApril, shanduro dzemapurogiramu mazana maviri nemakumi maviri nemashanu, maraibhurari, nemapulagini aburitswa. Ruzivo nezve kuwanikwa kweLive Assemblies neshanduro nyowani dzekushandisa dzinogona kuwanikwa pane ino peji.
1 KDE Gear 21.04 Makiyi Nyowani Nyowani
1.1 Edza KDE Gear
KDE Gear 21.04 Makiyi Nyowani Nyowani
Kontact yemunhu wega ruzivo maneja manejimendi kugona kwakawedzerwa, kufukidza maficha senge email mutengi, kendari kuronga, manejimendi chitupa, uye bhuku rekero. Karenda Planner ikozvino inogona kutumira kukoka kumisangano yakarongwa uye kutumira chenjedzo kana nguva yechiitiko yashanduka.
Iyo tsamba mutengi KMail inowedzera kutsigira kweiyo Autocrypt standard, iyo inorerutsa kunyorera kwekunyorerana kuburikidza neyakareruka otomatiki kumisikidza uye kiyi kuchinjana usingashandise makiyi maseva (kiyi inongopfuudzwa pakarepo pane yekutanga meseji yakatumirwa).
Iyo mail backend inova nechokwadi chekuti ruzivo nezve ivo vanotumira ematsamba matsamba anochengetedzwa, kunyangwe kana mushandisi asina kunyatso kuwedzera iwo kubhuku rekero. Iyo yakaunganidzwa data inoshandiswa kuita kurudziro kana uchizadzisa kero mune tsamba nyowani.
Iko kuvandudzwa kweiyo KDE nzira yeiyo mubatsiri wekufamba akagamuchira zvigadziridzo uye mushanduro nyowani kugona kuziva chinzvimbo chemakwenzi nema escalator pamepu akawedzerwa kubva kuchiteshi, pamwe ne shandisa ruzivo kubva kuOpenStreetMap yeruzivo nezve nguva yekushandisa. Uye zvakare, kupatsanurwa pamepu yemhando dzemabhasikoro emabhasikoro anopiwa (unogona kuisiya chero mune yekupaka kana iwe unofanirwa kudzokera kunzvimbo yekutanga).
Isu tinogona zvakare kuwana kugadzirisa mune iyo maneja faira Dolphin, sekukwanisa kuburitsa mafaera panguva imwe chete kwakawedzerwa. Iyo interface ine yakajeka mhenyu yekumisikidza maidhoni nekuparadzanisa iyo yekutarisisa kana kuyananisira hwindo. Paunenge uchivhura tabo nyowani, zvaive zvichikwanisika kugadzirisa: vhura tebhu nekukurumidza mushure mezvino tebhu kana panoperera runyorwa.
Zvishandiso zvakavakirwa-mukati zvekushanda neGit, Mercurial, uye Subversion repositori zvakawedzera mudzi dhairekitori yekopi inoshanda yeiyo repository.
Chero bedzi uine mukana wekushandura zvirimo zvemamenu ezvinyorwa, semuenzaniso, mushandisi anogona kubvisa zviri pachena zvisina basa zvinhu. Rondedzero izere yezvirongedzero uye sarudzo zvinogona kugara zvichiwanikwa mune hamburger menyu inoratidzwa kurudyi kumusoro kwehwindo.
Elisa anowedzera rutsigiro rwekutamba mafaera odhiyo muAAC fomati uye gadzira playlists mu .m3u8 fomati, inosanganisira ruzivo nezve nziyo, maartist, uye maalbham akatsanangurwa muCyrillic. Yakagadziriswa ndangariro yekushandisa kana uchipururudza uye zvirinani kusangana kweiyo mobile vhezheni neiyo Android chikuva.
Zvakare kuwedzerwa tsigiro yeAV1 fomati muKdenlive vhidhiyo mupepeti uye pakanga paine shanduko yakareruka yesero remakwara nekukwevera iwo anotsvedza anoonekwa kumagumo eiyo yakatwasuka scroll bar.
MuKonsole yakaremara adaptive zvinyorwa kugovera nzira yakawedzerwa apo hwindo rakadzikiswa. Uye zvakare, yakapa mhando dzemhando nemazita, zvishandiswazve dialog manejimendi uye maprinta ekumisikidza, kuwedzera kuoneka kwekusarudzwa kwemavara, kupihwa mukana wekusarudza mupepeti wekunze, wakakonzerwa neCtrl-kudzvanya pane iro faira faira.
Kate ikozvino anotsigira kupuruzira uchishandisa touch skrini. Wakawedzera kugona kuratidza ese TODO manotsi mune projekiti. Isu tinoshandisa maturusi ekuita ekutanga mashandiro muGit, senge sekuona shanduko.
Edza KDE Gear
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » KDE Zvikumbiro zvinoshandura zita ku KDE Gear uye zvinosvika pamwe nekuvandudzwa kwaApril
Kodhi yakaipa inokanganisa kiyi yaHashiCorp yePGP